Mad. Shariif iyo Mas,uuliyiinta Dowlada KMG ka Ah oo Maanta Booqday Dhaawacyada Shacabkii Shalay La Xasuuqay + Sawiro | buqaqable.net
France: Booliska oo Toogtey Nin Weeraray Suuq March 23, 2018
Booliska dalka Faransiiska ayaa toogasho ku dilay nin hubeysnaa oo dhowr qof xoog ku heystay dukaan weyn oo ku yaala magaalada magaalada Trèbes, ee koofurta Faransiiska.
Cayaaro saaxiibtinimo oo caawa dhacaya March 23, 2018
Waxaa caawa ka dhici doona dalal badan oo dunida ah kulamo cayaareed oo saaxiibtiimo, oo ay cayaari doonaan qaar ka mid ah xulalka dunida. Kulamadan ayaa waxaa badankood la isugu diyaarinayaa koobka kubadda cagta adduunka ee bisha June ee sanadka lagu qabanayo dalka Ruushka. Cayaaraha dhacaya ayaa ah kuwan Japan vs Mali Azerbaijan vs Belarus Cyprus vs Monte […]
Wareysi: Xaaladda Biyo Yarida Soomaaliya March 23, 2018
Khamiistii (March, 22) dunidu waxey xustay maalinta biyaha aduunka oo ah maalin loo asteeyay wacyi galinta, ahmiyadda biyaha ee nolosha. Waxay sidoo kale sheegtay in helista biyo nadiif ah oo la cabo aysan aheyn wax qof walba uu heli karo.
Q.M. oo Eedeysay Isbaheysiga Sacuudiga March 23, 2018
Qaramada Midoobay ayaa sheegtay in duqeynta isbaheysiga uu Sacuudigu hormuudka ka yahay ay ka wadaan Yemen ay leedahay sababta ugu badan ee dhimashada iyo dhaawaca dadka rayidka ah ka soo gaaraya colaadda Yemen
Faaqidaadda: Mowshinka ka Dhanka ah Jawaari March 23, 2018
Ku soo dhawaada Barnaamijka Faaqidaadda Toddobaadka, oo markan aynu diiradda ku saareyno mowshinka ka dhanka ah guddoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya, Maxamed Sheekh Cismaan Jawaari.
Trump oo Beddeley La Taliyihiisa Ammaanka Qaranka March 23, 2018
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa beddalay la taliyihiisii dhanka ammaanka qaranka oo noqonaya kii ugu danbeeyey saraakiil sar sare oo ka mid ha maamulkiisa oo shaqada ka tegay muddada 14kii bil ee uu xilka hayo ah.
Waraysi Doorashada Soomaaliya March 23, 2018
Guddiga doorashada Soomaaliya ayaa laga sugayaa inay qabtaam shaqooyin dheeraad ah si ay Soomaaliya uga suurtogasho doorasho ay dadweynuhu ka wada qaybqaataan sannadka 2020-ka.
Dhimashada Qaraxa Muqdishu oo Korodhay March 23, 2018
17 qof ayey maraysaa tirada dhimashada ka dhalatay weerarkii shalay ka dhacay Muqdishu. Ururka Al-Shabab ayaa sheegtay mas'uuliyadda weerarka.
Afrika oo ku Heshiiyay Her-gelinta Ganacsiga Xorta ah March 22, 2018
Madaxweynayaasha wadama Midowga Afrika ayaa Arbacadii shalay kaga dhawaaqay shir uga furmay magaalada Kigali ee xarunta dalka Rwanda, wax noqon kara xarunta ganacsiga xorta ah ee ugu ballaaran dunida.
14 Ruux oo Ku Dhimatay Qarax Muqdisho ka Dhacay March 22, 2018
Weerar loo adeegsaday gaari waxyaabaha qarxa laga soo buuxiyay inay ahaayeen mooto bajaaj wax yaabaha qarxa laga soo buuxiyay ayaa ku qarxay agagaarka Hotel Wehliye ee magaalada Muqdisho, gelinkii dambe ee maanta.
SAPA oo War Kasoo Saaray Eedaha Loo Soo Jeediyay Maxamed Nuur March 22, 2018
Urur ay ku mideysanyihiin ciidamada booliska Soomaali-Mareykanka ee gobolka Minnesota oo (SAPA) loo soo gaabiyo ayaa ayaa sheegay inay ka xunyihiin eedaha loo soo jeediyay Maxamed Noor oo horey uga tirsanaa booliska Magaalada Minneapolis.
Ibrahimovic oo ka tagaya Manchester United March 22, 2018
Weeraryahan Zlatan Ibrahimovic ayaa la filayaa inuu ka tago kooxda kubadda cagta Manchester United, sida ugu dhaqsaha badan. Inkasta oo kooxda Man United aysan si rasmi ah ugu dhawaaqin, haddana waxaa la rumeysan yahay in macallin Jose Mourinho uu ogolaaday inuu Ibrahimovic kasii daayo qandaraaskiisa kooxda ee ku eg 30-ka June. Illaa iyo hadda ma cadda halka […]
Waddani: Waxaan Kalsoonidii Kala Noqonney Guddiga Doorashada March 22, 2018
Xisbiga mucaaradka ee Waddani ayaa maanta sheegay in ay kalsoonidii kala noqdeen guddida doorashada Somaliland, waxaanay qoraal ay u gudbiyeen madaxweyne Muuse Biixi ay kaga dalbadeen in la kala diro guddigaasi.
IGAD oo Ka Arrinsaneysa Xaaladda Qaxootiga March 22, 2018
Sida ay sheegtay Qaramada Midoobay, 66 milyan oo qaxooti ah oo ka soo cararay dagallada iyo coladaha duniga ayaa maanta ku baahsan dhammaan caalamka.
Maxamed Nuur oo Dammaanad Lagu Sii Daayay March 22, 2018
Maxamed Nuur oo horey uga tirsanaa booliska magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota ee dalkan Mareykanka ayaa xalay dammaanad lagu sii daayay.
USA: Booliska oo Heley Muuqaal uu Duubey Nin Is-qarxiyay March 22, 2018
Taliyaha ciidanka booliska magaalada Austin ee caasimadda gobolka Texas ee dalkan Mareykanka, Brian Manley, ayaa sheegay in ninka looga shakisanyahay inuu ka danbeeyay bambooyin lagu qarxiyay Austin uu moobeylkiisa ku duubay muuqaal 25 daqiiqo ah ka hor inta uusan is dilin.
Qubanaha VOA, March 22, 2018 March 21, 2018
Muqdisho: Ciidamo Ka Wada Tirsan Dowladda oo Dagaallamay March 21, 2018
Haweenka iyo Qoyska: Kobcinta Aqoonta Waalidka ee Maandooriyaha March 21, 2018
Adeegsiga maandooriyaha ayaa noqday mid dhibaato wayn ku haya dhallinyarada ku nool dalka Maraykanka. Inta badan dhallintan ayaa ah kuwo wali ku jira dusgiyada hoose, dhexe, iyo sare, iyadoo qaarkoodkna ay iskuulada isaga haraan ka dib marka uu adeegsiga mukhaadaraadka soo rito.
Africom: Waxaan Dilnay Xag-jiriin March 21, 2018
War-saxaafadeed ay soo saareen taliska ciidamada Maraykanka ee Afrika ee loo yaqaan Africom ayaa lagu sheegay in ciidamada Maraykanku iyagoo gacan ka helaya dawladda faderaaliga ah ee Soomaaliya ay duqayn ay ka fuliyeen 19 kii bishan Maarso meel u dhaw tuulada Mubaarak ee gobolka Shabeellaha Hoose ay ku dileen xagjirayaal, baabuurtoodana ay burburiyeen.
Mad. Shariif iyo Mas,uuliyiinta Dowlada KMG ka Ah oo Maanta Booqday Dhaawacyada Shacabkii Shalay La Xasuuqay + Sawiro
Posted on October 5, 2011 by Buqaqable.net
Muqdisho : Madaxweynaha DKMG ka Ah Madaxweyne ‘Sh shariif iyo
Masuuliyiin ka tirsan dowlada KMG ka Ah ee Soomaaliya ayaa maanta
Booqday dhaawacyada dadkii ku Waxyeloobay Jariimadii ay shalay
Kooxda Al –Shabaab ka fulisay Muqdisho Madaxweyana iyo Masuuliyiintan ayaa dhaawacyada dadka aadka u daran waxay u balan qaadeen in ay sida ugu dhaqsiyaha badan loola kaashan doono wadamada Saaxiibka la ah Soomaaliya
si dibada loogu qaado dadka shalay ku wax yeeloobay qaraxii al-shabaab ayaa iskugu jiray
Noocyo badan sida dad dhaawacyo khafiif ah qaba kuwo dhaawacyo aad u daran leh kuwo
Goobta ku naf baxay iyo kuwa ugu daran oo ah kuwo dhamaan jirkooda uu gubtay kuwaasoo
Aan marnaba wadanka gudihiisa wax looga qaban karin dadkii goobta ku naf Baxay
Ayaa iyagana waxaa ka mid ahaa dad aan meydkooda la garan oo jirkoodi iyo Dharkoodiba uu
La tagay Shidaalkii holcayay ee ay gaariga ku soo rareen tirada dhimashadana ilaa Maanta
Waxay gaartay 76 halka uu dhaawacuna cag cageynayo 150 ruux oo gedigood Soomaali ah Muslimiin ah
Filed under: Buqaqable |
« Qaar Ka Mid Ah Sawirada Xasuuqii Maanta Ka dhacay Magaalada Muqdisho Dowlada Turkiga oo Dalkeeda u Qaadeysa Dhaawacyada Qaraxii Shalay Muqdisho Ka Dhacay »
Dowladda Congo: Qaramada Midoobay "Sawir qaldan ayay ka bixinaysaa Congo". March 24, 2018
Dowladda Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo ayaa sheegtay in aysan ka qaybgali doonin shirk deeq bixiyayaasha oo ka dhacaya magaaalada Geneva.
Rabshado ka dhacay gobolka Katalooniya ee dalka Spain March 24, 2018
Kumannaan qof oo ah taageerayaasha xisbiyada gooni ugoosadka gobolka Katalooniya ayaa waxa ay isku dhaceen booliska Spain, kaddib markii xabsiga la dhigay dhawr ka tirsan hoggaamiyeyaasha Katalooniya, kuwaa oo ay xirtay dowladda Spain.
Xiisaddda u dhaxeysa Ruushka iyo Yurub oo cirka isku shareertay March 23, 2018
Dowladda Ruushka ayaa sheegtay in Midowga Yurub ay wadaan olola ka dhan ah Ruushka taasi oo ay huriyeen Britain Mareykanka.
Buhari oo la kulmay gabdhihii Dapchi March 23, 2018
Boqol iyo lix gabdho ciyaal-iskuul ahaa iyo wiil ay afduubteen kooxda Boko Haram ayaa loo geeyay madaxweyne Muhammadu Buhari.
Shiinaha oo ku goodiyay in uu ka aarsan doono Maraykanka March 23, 2018
Dawladda Shiinaha ayaa sheegtay in ay ka baaraandagayso canshuuro ay ku soo rogto alaabada Maraykanka laga soo dhoofiyo oo qiimahoodu ku kacayo 3 bilyan oo doolar.
Faransiiska: Booliiska oo toogtay nin dad ku dhex dilay supermarket March 23, 2018
Booliis hubeysan ayaa dilay nin looga shakisan yahay inuu saddex qof ku toogtay koofurta Faransiiska.
Dowladda Iiraan oo cambaareysay magacaabidda John Bolton March 23, 2018
Dowldda Iiraan ayaa cambaareysay magacaabidda uu madaxwayne Trump u magacaabay John Bolton la taliyihiisa dhanka ammaanka.
Nin u xirnaa 31 sano dambi uusan galin March 23, 2018
Nin u xirnaa 31 sano dambi uusan galin ayaa ku guulaystay 1 milyan oo doolar oo magdhaw ah.
Mareykanka oo ku eedeeyay Ruushka in ay hubaynayaan kooxda Taliban March 23, 2018
Ruushka ayaa taageeraya islamarkana hub siinaya kooxda Taliban, waxaa sidaasi BBC u sheegay madaxa ciidamada Mareykanka ee ku sugan Afqaanistan.
Suuriya: Mucaaradka bariga Ghouta oo xabad joojin ku dhawaaqay March 23, 2018
Mid ka mid ah kooxiha mucaaradka ee ku haray bariga Ghouta, ayaa waxay ku dhawaaqeen xabad joojin.
Soomaalida Mareykanka oo laga wacyigelinaya Kansarka ku dhaca mindhicirka March 23, 2018
Bishan oo kale Sanad kaste waxaa waddankka Maraykanka laga xusaa xannunka Kansarka ee ku dhaca mindhicirka, kaa oo la sheegaya in uu yahay nooca labaad ee Kansarka ee ku dhaca dadka Maraykanka.
Kansarka siibadanaya oo cayilka lala xiriiriyay March 23, 2018
In aad loo cayilo ayaa qayb wayn ka qaadata waxa sababa Kansarka sii badanaya, halka ay hoos uga dhaceen kansarka uu keeno sigaar cabbidda, sida ay sheegayso cilmibaadhis wayn oo la sameeyay.